MENA: Mitondra fifaliana ve ny orana sa fahoriana e? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2018 4:08 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny janoary 2010)
Avy any Syria:
Orambe manerana an'i Syria. Misy hatrany ny fifandraisan'ny orana sy ny zavatra tsara. Rehefa avy ny orana dia faly kokoa ny olona ary mamirapiratra ny masonay.
Avy any Arabia Saodita:
Tadiom-pasika maharikoriko tao Jeddah. Tsy misy na inona na inona tazana. Manantena aho fa hanakianana ny manampahefana ao Jeddah ny tadiom-pasika fa tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana?
Jeddah mihosom-bovoka sy misiokan-tadio
Avy any Jordana:
orana orana orana
Avy any Ejipta, Nahitana orana betsaka tany Alexandria sy afovoan-tanànan'i Kairo:
niresaka ny orana tao Ejipta i Zeinobia.
Oram-batravatra mbola tsy hitako nandritra ny taona maro tao Mohendessin
Mifandimby ny orana sy ny masoandro mibaliaka tamin'ny lalako ho any am-piasana (Salah Salem avy any Helio), saingy mandrahona sy orambe amin'izao fotoana izao eto Dokki
@EngyG : it's raining in mohandessin sporadically, bas it is! 😉
Avy tsindraindray ny orana eto mohandessin, ratsy 😉
Avy betsaka ny orana eto amin'ny Tanànan'ny Zaridaina
Nanamafy ny fisian'ny orana i Andrew izay monina ao Katameyya!
Orana! Avy be izy izany!
Any Alexandria, avy be tahaka ny mahazatra ary ahitana oram-panala kely ihany koa:
Avy dia avy ny orana eto alex, saingy nahitana oram-panala kely ihany koa izany… saingy efa nitsahatra izany
Mandrahona ahitana orana fa tsy misy tadio… Alexandria, Ejipta 🙂 … Hita hiposaka indray ny masoandro izao..
Saingy nahita zavatra nampalahelo tamin'izay nitranga tao Sinai noho ny orana i Cat of Desert:
Noho ny orambe sy ny tondra-drano tao Sinai,nisy olom-pirenena iray maty ary ny hafa kosa tsy hita popoka.
Ao amin'i Egyptian Chronicles i Zeinobia nilaza torohay betsaka kokoa tamin'ny tondradrano tao Sinai. Hoy izy:
Ratsy ny andro androany teto Ejipta, nisy ny faritra tsara vintana kokoa ka tsy nahitana orambe tahaka ny tao Kairo ohatra saingy nisy ny faritra sasany ratsy vintana ka tratran'ny orambe sy ny tondradrano araka izay efa nolazain'ny mpamantatra ny toedrano mialoha.
Efatra no maty raha ny antontanisa ofisialy, antenaina fa hahazo torohay tsara kokoa isika rehefa kelikely.
Aswan, Siai avaratra sy atsimo no tena nahitana famoizan'olona noho ny orana nivadika ho tondradrano hatry ny maraina.
Saingy ratsy kokoa ny vaovao:
Maty noho ny loza tao Neily ny Britanika mpizahatany iray noho ny orambe tao Aswan androany. Malahelo noho ny fahafatesany sy ny fahafatesan'ny hafa maty androany aho.
Misy ny tsaho milaza fa eo am-pitadiavana vondrona mpizahatany Israeliana ny tafika Ejiptiana sy ny tafika Israeliana. Efa nahita jeep israeliana nentin'ny tondradrano ny olom-pirenena tao Sinai tamin'ny maraina!!
Namaky ihany koa aho tao amin'ny sioka iray fa simban'ny orana ny seranam-piaramanidin'i Sharm El-Sheikh
Miverina any Sinai, nilaza i Zeinobia fa henjana ny toe-draharaha ao ary ilaina ny vonjy voina:
Tsy hoe tsy maninona izany ny toe-draharaha ao Sinai fa mila famonjena haingana, manantena aho fa hiditra an-tsehatra haingana araka izay tratra araka ny mahazatra ny tafika. Mivavaka ny mponina ao Sinai fa tsy handrava ny tranon-dry zareo ny orana ka hamono azy ireo.
Ilaina ihany koa ny manamarika fa nanamafy ny fisian'ny orambe ny mponina ao Luxor ao Ejipta ambony – sambany izany tao anatin'ny roa taona.
Nisy resaka fohy nitranga teo amin'ny bilaogera ejipsiana Embee sy Tarek Amr, ary mifanohitra amin'ny rehetra ity farany ity amin'ny tsy itiavany ilatsahan'ny orana.
Antenaina fa ho avy TSY HO ELA ny orana
Tsia kosa e, mankahala orana aho, ankahalaiko mihitsy io
fa manadio ny arabe ny orana.. sy ny hazo! ahoana no ankahalanao azy?
Manadio ny orana any an-kafa fa tsy eto Ejipta. Eto izy vao maika mandoto.
Namehy teny i Yasser Ahmad tamin'ny filazana hoe:
Izay rehetra milaza fa ny fibaliaky ny masoandro no mitondra hafaliana dia mbola tsy nandihy tao anaty orana mihitsy!